Adobe Illustrator CS5 Rohy misintona maimaim-poana
Photo Retouching Services > Retouching Blog > Malagasy Blog > Adobe Illustrator CS5 Download maimaim-poana
Adobe Illustrator CS5 Download maimaim-poana
By Ann Young, Mathis Ravatomanga 2022-05-05, Malagasy Blog
Efa nanontany tena momba ny Adobe Illustrator CS5 rohy fampidinana maimaim-poana ve ianao? Tsy te handany vola ary mividy Illustrator avy amin'ny loharano nahazoana alalana? Ho hitanao ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba fampidinana sy fametrahana ny kinova feno Adobe Illustrator CS5 nefa tsy mandoa dolara. Tohizo ny vakiana raha te hahita safidy maimaim-poana ary tadiavo ny valin'ireo fanontaniana apetraka matetika indrindra mifandraika amin'ny dikan'ity rindrambaiko ity.
Adobe Illustrator CS5 Tombontsoa
Betsaka ny endri-javatra famoronana sy fitaovana mahery vaika
Fahaizana manao sary amin'ny fomba fijery
Vokatra tsy miankina amin'ny fanapahan-kevitra
Ny tontonana fisehoana hanitsiana toetra
Azo atao ve ny misintona Adobe Illustrator CS5 version andrana amin'ny tranokala ofisialy?
Tsia, satria tsy manohana version CS5 intsony i Adobe. Adobe Illustrator no kinova vaovao sy tokana azonao alaina mandritra ny fotoam-pitsarana avy amin'ny tranokala ofisialy.
Ohatrinona ny vidin'ny Adobe Illustrator feno?
Adobe dia tsy manome fanohanana ny Illustrator CS5. Na izany aza, afaka mitsidika ny tranokala ofisialy ianao ary mividy ny kinova farany an'ny Illustrator 2022 v24.1.2.402 amin'ny $20.99 isam-bolana. Rehefa mividy famandrihana ianao dia ho afaka hijery ny mety ho an'ny rindrambaiko amin'ny fomba feno.
Miasa amin'ny Windows sy Mac OS ve ny kinova andrana Illustrator?
Eny, ny fitsarana Illustrator dia mifanaraka amin'ny Windows sy Mac OS.
Hafiriana no ahafahako mampiasa ny fitsarana?
Rehefa mijery ny Adobe Illustrator andrana maimaim-poana, azonao ampiasaina mandritra ny 7 andro. Rehefa tapitra ny fotoam-pitsapana dia hiova ho azy ho famandrihana Creative Cloud izany raha tsy nofoanana izany taloha.
Ny andrana maimaim-poana ve dia dikan-teny feno an'ny Illustrator?
Eny, manana ny fiasa rehetra sy ny fanavaozana ny kinova farany an'ny Illustrator izy.
Adobe Illustrator CS5: Version pirated
Navoaka tamin'ny 2010, Adobe Illustrator CS5 dia dikan-teny lany andro amin'ny rindrambaiko. Noho izany, tsy azo atao ny maka izany amin'ny tranokala ofisialy. Mety hahita sehatra piraty maro ianao izay manolotra Adobe Illustrator CS5 rohy misintona maimaim-poana feno.
Na dia toa maka fanahy toy inona aza izany, raha vao manaraka ny iray amin'ireo rohy ireo ianao ary misintona programa, dia mety hiatrika olana lehibe ianao. Etsy ambany, nofaritako ny voka-dratsiny matetika mety hatrehinao raha mandika ny zon'ny mpamorona rindrambaiko ianao.
Tsy ara-dalàna ny piraty rindrambaiko ary mety hitarika ho amin'ny andraikitra sivily sy heloka bevava. Raha mampiasa na mizara vokatra voajirika toy ny Adobe Illustrator keygen, mety hiafara amin'ny sazy ara-bola izany ary na dia sazy an-tranomaizina aza. Any Etazonia, ny sazy amin'ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona dia voasazy onitra hatramin'ny $250,000 isaky ny fandikan-dalàna sy/na hatramin'ny dimy taona an-tranomaizina.
2. Atahorana ho voan'ny aretina
Ny ankamaroan'ny Adobe Illustrator Torrent Ny rohy dia misy viriosy sy malware maro. Raha vao mametraka ny rindrambaiko voajirika ao amin'ny PC-nao ianao, dia misy ny vintana mety ho voan'ny viriosy. Mety hitarika olana amin'ny rafitra isan-karazany izany, toy ny pop-up manelingelina sy fianjerana.
Ankoatra izany, afaka mangalatra ny mombamomba anao manokana ny hackers, toy ny angona faktiora na tenimiafina. Mazava ho azy, azonao atao ny mitsabo ny aretina amin'ny fanampian'ny rindrambaiko antivirus maimaim-poana tsara indrindra, fa maninona no mampidi-doza?
3. Tsy fahampian'ny fanavaozana
Zava-dehibe ny fanavaozam-baovaon'ny lozisialy satria matetika izy ireo dia misy patch mitsikera mba hanitsiana ny lesoka sy hanatsarana ny fahamarinan'ny programanao. Raha mampiasa a Adobe Illustrator crack version, tsy hahazo fanavaozana ianao. Noho izany, raha manapa-kevitra ny hanaraka rohy fampidinana Adobe Illustrator CS5 ianao ary hametraka ilay programa, dia tsy hahazo tombony amin'ireo endri-javatra mahasoa vaovao miaraka amin'ny fanavaozana farany ianao.
4. Olana amin'ny fanatanterahana
Ankoatra ny lavaka fiarovana, mampiasa programa vaky toy ny Adobe Illustrator Portable mety hiteraka voka-dratsy tsy mahafinaritra, toy ny fahatarana, ny fahadisoana ary ny tsy fifanarahana. Ary koa, mety hamoy ny asanao ianao ary hampihena ny vokatrao. Ny bibikely sy ny glitches tsy tapaka dia mety hiteraka fianjerana na hahatonga ny programa tsy azo ampiasaina tsotra izao.
Jereo ny ahy Feno Adobe Illustrator Famerenana.
Maimaim-poana Adobe Illustrator CS5 Alternatives
Ireo izay tsy te-hampiasa rohy fampidinana Illustrator CS5 ary tsy vonona ny handoa ny dikan-teny feno amin'ny rindrambaiko, dia afaka manararaotra ny programa maimaim-poana miaraka amin'ny fiasa mitovy. Mitadiava safidy 5 feno indrindra izay tsy latsa-danja amin'ny Illustrator amin'ny lafiny fiasa.
Fomba fianarana mora
Betsaka ny fitaovana
Tsy ahitana endri-javatra mandroso sasany
Vectr dia safidy tsara ho an'ireo mpampiasa SVG vaovao sy matihanina. Miaraka amin'ny interface tsara sy tsy mikorontana, afaka mifantoka amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny asanao ianao. Na izany aza, tsy midika izany fa tsy ampy fitaovana ny programa.
Vectr dia ahitana ireo endri-javatra fototra, toy ny lahatsoratra, endrika, aloka, sisin-tany, sosona, fiaviana sy ny maro hafa. Miaraka amin'ny fitetezana mahitsy sy curve fianarana mora, dia ho mora ny miasa amin'ny tetikasanao. Ity rindrambaiko cross-platform ity dia mifanaraka amin'ny rafitra fiasa isan-karazany, ao anatin'izany ny Mac OS, Windows, Chrome OS ary Linux. Raha mampiasa vokatra Adobe ianao dia mila mividy ny solosaina finday tsara indrindra ho an'ny Adobe Illustrator, raha toa kosa ny Vectr dia mahazaka loharanon-karena.
Be dia be ny fitaovana famolavolana matihanina
Miasa tsara amin'ny solosaina malemy
Endrika efa lany andro
Mila hatsaraina ny fitaovana an-tsoratra
Inkscape dia iray amin'ireo safidy azo ampitahaina indrindra amin'ny Adobe Illustrator CS5 download. Mety ho an'ireo izay miasa amin'ny endrika rakitra SVG. Ny programa dia ahitana fitaovana mitovitovy amin'izany mba hiasa amin'ny sketsa, sary ary sary.
Ny Inkscape dia manana lakile mitovy amin'ny fifindran'ny zavatra amin'ny alàlan'ny pikan-tsary, fitaovana fanaraha-maso bitmap, ary koa ny fahaizana mandoko zavatra misy loko sy gradient. Ny fampifangaroana fitaovana mahery vaika miaraka amin'ny interface madio sy intuitive dia mahatonga ity rindrambaiko sary vector ity ho safidy tsara ho an'ny mpampiasa semi-pro sy matihanina.
Mianara bebe kokoa momba ny rindrambaiko famolavolana sary maimaim-poana tsara indrindra.
Miasa amin'ny endrika rakitra maro
Fanitarana tsara ho an'ny navigateur
Ahitana hitsin-dàlana fitendry
Raha tokony hitady fomba azo atao ny ny fomba hahazoana Adobe Illustrator maimaim-poana, tsara kokoa ny mampiasa Boxy SVG, tonian-dahatsoratry ny sary vetaveta azo esorina izay mandeha ho fanitarana ao amin'ny Google Chrome. Tafiditra ao anatin'izany ny fitaovana maromaro ahafahana miasa tsara amin'ny sary vetaveta, ao anatin'izany ny penina, lahatsoratra, curve bezier ary endrika SVG fototra.
Boxy SVG dia manana interface tsara sy mahitsy izay mitovy amin'ny Adobe Illustrator. Ho fanampin'izany, dia manasongadina hitsin-dàlana fitendry azo zahana ho an'ny baiko 100+. Ankoatra ny rakitra SVG na SVGZ mahazatra, dia azo atao ny miasa amin'ny endrika JPG na PNG, izay tena ilaina.
Mety ho an'ny vao manomboka
Tranomboky lehibe amin'ny endrika
Tsy manana fiasa karama miafina
Safidy maro ho an'ny fanamboarana
Tsy ahitana endri-javatra mandroso
Vecteezy Editor dia tonian-dahatsoratry ny sary vetaveta an-tserasera manankarena sy mora ampiasaina. Izy io dia manana endri-tsoratra 800+ efa voapetraka mialoha ary zavatra 25,000+ namboarina. Vecteezy Editor dia fitaovana azo amboarina tanteraka izay ahafahanao tsy manitsy ny mari-pamantarana ilaina ihany fa mampakatra sy manitsy ny tetikasanao manokana amin'ny SVG, JPEG, PNG endrika rakitra.
Vecteezy Editor dia tonian-dahatsoratry ny sary vetaveta voarafitra tsara miaraka amin'ny interface intuitive izay mety ho an'ireo vao manomboka.
Minimalist sy manampy mpampiasa interface tsara
Mora miasa amin'ny pejy maromaro
Safidy fanondranana mora
Indraindray dia mety mitaredretra
Gravit dia ahitana ny fitaovana fototra rehetra amin'ny fanovana véctor izay mety antenainao, ao anatin'izany ny pen, bezigon, tsipika, slice, antsy, gradient editor, sns. Sns
Ankoatra izany, Gravit dia manana interface intuitive ary miaraka amin'ny video tutorials. Satria tonian-dahatsoratry ny sary vetaveta miorina amin'ny Internet izy io, mamela anao hiasa amin'ny tetikasanao na aiza na aiza. Mila fifandraisana Internet fotsiny ianao. Fanampin'izany, azo atao ny manafatra sy manondrana rakitra amin'ny endrika isan-karazany, izay manome teboka fanampiny Gravit raha ampitahainao amin'ny Adobe Illustrator CS5 fampidinana maimaim-poana ny fiasany.
Fantaro bebe kokoa Adobe Illustrator hafa.
Adobe Illustrator dia manana endritsoratra marobe efa napetraka mialoha. Na izany aza, azonao atao ny mampitombo ny fanangonanao mba hanomezana ny sangan'asanao manokana. Diniho ny mety ho fahaiza-mamorona anao amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo fanomezana maimaim-poana ireo.
Ampidino ny endritsoratra maimaim-poana
Hatsarao ny tetikasanao amin'ny fampiasana an'ity endritsoratra kilasy voalohany ity. Izy io dia endri-tsoratra mahazatra misy sisiny mahitsy sy tapaka. Aza misalasala mampihatra izany amin'ny karazana sary sy endrika isan-karazany mba hahatonga ny asanao ho malaza.
Zahao hoe borosy Illustrator maimaim-poana.
Amin'ny maha-universal sy kanto, ity endri-tsoratra ity dia hanampy anao hahatratra ny tanjonao famoronana rehetra. Manasongadina tsipika lava miolikolika manaitra, ity endri-tsoratra ity dia mitovy amin'ny tena sora-tanana tamin'ny andro taloha.
Jereo ireto kisary Adobe Illustrator maimaim-poana.
Io no iray amin'ireo endritsoratra miavaka indrindra izay tadiavin'ny mpamorona sy ny mpaka sary. Tena fampifangaroana ny sora-tanana calligraphic sy ny famoronana.
Zahao hoe maimaim-poana Illustrator textures.
Ampidino maimaim-poana ny Adobe Illustrator CS5
Misintona Adobe Illustrator maimaim-poana ho an'ny Mac/Win
Araho ny rohy etsy ambony mba hisintonana maimaim-poana ny dikan-teny Adobe Illustrator avy amin'ny tranonkala ofisialy. Azonao atao ny manandrana ny fahaiza-manao mitovy amin'ny dikan-karama, ary ny hany mahasamihafa azy dia ny fampiasanao azy mandritra ny fito andro ihany.
Adobe Illustrator CS5 tombony
Adobe Illustrator CS2 alaina maimaim-poana
Adobe Illustrator CS3 alaina maimaim-poana
Adobe Photoshop Free Download Ho an'ny Windows 8
Adobe Illustrator Download maimaim-poana ho an'ny Windows 10